Raha ny fomba fijerin'ny mpivarotra dia mino aho fa manana ny tena zava-misy marina ny augmented zava-misy fa tsy ny zava-misy virtoaly. Na dia mamela antsika hiaina traikefa artifisialy tanteraka aza ny zava-misy virtoaly, ny zava-misy ampitomboina dia hanatsara sy hifanerasera amin'ny tontolo onenanay ankehitriny. Nifampizarantsika mialoha ny fomba AR dia mety hisy fiantraikany amin'ny marketing, saingy tsy mino aho fa nanazava tamin'ny fomba feno ny zava-misy marina izahay ary nanome ohatra.
Ohatra iray hafa eny an-tsena ny toetran'ny Yelp ao amin'izy ireo finday fampiharana antsoina hoe Monocle. Raha misintona ny fampiharana ianao ary manokatra ny menio misimisy kokoa, dia hahita safidy antsoina ianao Monocle. Ny Open Monocle sy ny Yelp dia hampiasa ny toerana misy anao, ny toeran'ny telefaoninao, ary ny fakan-tsarinao hanaronana ny angon-drakitra an-tsary amin'ny alàlan'ny fijerin'ny fakantsary. Tena tsara izy io - gaga aho fa tsy dia miresaka momba izany matetika izy ireo.